ဆုံဆည်းရာ: ရင်ဘတ်ထဲကသင်္ကြန် . . .
ရင်ဘတ်ထဲကသင်္ကြန် . . .
ချစ်ခြင်းတွေ သီဖွဲ့ထားတဲ့ သင်္ကြန်
ဘယ်တော့မှ မွန်းမလွဲတတ်တဲ့ သင်္ကြန်
ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီပေါ့ .. …
ငုဝါ၊ ပိတောက်၊ ခရေကောက်လို့
တူးပို့၊ တူးပို့ တေးရိပ်ဆို
မြို့မက စန္ဒယားဆရာလေး ကိုငြိမ်းမောင်
သက်ထွေးနဲ့ နွယ်နွယ် အားလုံးကို
နွေပူ ကြဲကြဲထဲက သင်္ကြန်ကတော့
အလှပဆုံး ဖူးပွင့်ခဲ့ပြန်ပြီ … … ။
(၁၄၊ ၀၄၊ ၂၀၁၃) (သင်္ကြန်အကျနေ့)
Posted by Tide at 2:46 PM
Labels: ကဗျာ, ရိုးဆက်